ठाडै चुनौती ठिटोलाई, बेहुला बेहुली पनि जोशिए , अचम्मै भयो ! गुल्मी रुपाकोटको पन्चेबाजामा जे देखियो (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
ठाडै चुनौती ठिटोलाई, बेहुला बेहुली पनि जोशिए , अचम्मै भयो ! गुल्मी रुपाकोटको पन्चेबाजामा जे देखियो (भिडियो सहित)
पन्चे बाजाको सुमुधुर धुनमा यस्तै एउटा जोडीको उत्कृस्ट प्रतिभा तलको भिडियोमा हेर्न सक्नु हुनेछ । गुल्मी रुपाकोट बिबाहको सन्दर्भको देखा परेको एउटा उत्कृस्ट प्रतिभा पन्चे बाजाको धुनमा दर्शकहरुलाई लोभ्याउने खालको डान्स प्रतिभा बाहिरिएको छ । यस्तै यस्तै लुकेका प्रतिभा हरु गाउ घरको जस्तै विवाह, व्रतवन्ध, चाडबाड, जात्रा, रोपाईं, पूजा-आजा आदि हरुमा देख्न पाइन्छ ।
गुल्मी देखी रबिलाल पौडेलको सहयोगमा यो भिडियो तपाईहरुको लागि :